Global Voices teny Malagasy » Korea: fahazarana 17 mahatonga ny hoditrao ho malaky antitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Korea: fahazarana 17 mahatonga ny hoditrao ho malaky antitra
Voadika ny 18 Janoary 2009 13:37 GMT 1	 · Mpanoratra Hyejin Kim Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Korea Atsimo, Fahasalamàna, Hehy, Zavakanto & Kolontsaina
Hanolotra lahatsoratra  iray milaza fampahafantarana mahaliana (na mampihomehy) anareo aho: ny fahazarana 17 anananao izay manome taona (fahanterana?) ny hoditrao.
Mahatsara ny hoditrao ve ny vokatra fandiovan-tarehy lafovidy!? Noho izany finoana lehibe anananao amin'ny vokatra fandiovan-tarehy lafovidy izany dia tsy miraharaha ny hoditrao ianao. Ary dia ao anatin'ny dimy taona ianao dia mety haheno hoe “Raneny ô! fa fandiovantarehy inona no nampiasainao e…”
Tena zava-dehibe tokoa ny ikarakaranao ny hoditrao. […]ampahafantarina ny antony maro mahatonga ny fahanterany.
Tia Sôkôlà sy mofomamy ianao.
Raha ampitahaina amin'ny gliosida hafa dia betsaka kokoa ny siramamy ao anatiny ka hanamarika (handoro) kokoa vatanao izany. Maha-antitra io e! fa aleo ireny soloina mofo fotsy sy ovy nendasina (natao anaty lafaoro) fa ireny no miova ho gliokôzy.
Mihomehy amin'ny masonao ianao.
Araka ny fikarohana, dia misy ketrona kokoa ny manodidina ny mason'ny olona mitsiky amin'ny maso raha mitaha amin'izay tsy manao izany. Hatramin'ny faran'ny taompolo 20, mora roritina kokoa ny hoditra ary dia hahatonga ketrona maro kokoa amin'ny hoditrao ny tsiky amin'ny masonao. Manandrama mihomehy amin'ny molotra fa tsy amin'ny maso.
Tsy maintsy atao ny fanazarantena mety hahatsara ny fahasalamana sy ny fikarakarana ny hoditra. Fa hono ho'aho, fantatrao ve ny fotoana hijanonan'ny mpanao fanatanjahantena, misy ketrona ve ny hodiny? Fanampin'izany, raha be loatra ny zaatra ataonao, mampiketrona ny tavanao ianao. Hampisy ketrona madinika izany.
Matory mihorirana ianao.
Ny fahazaranao matory tahaka izany no heloka lehibe mahatonga ketrona hivandravandra amin'ny tetamasonao. Tokony an-katoka hatrany ny ondanao. Tsy tokony ho avo na iva loatra ny ondana. Raha toa ka mifanao ambony ambany ny tenda sy ny hatokao, dia hihangeza ny tavanao. Aza matory mihohoka manao ny sandrinao ho ondana na mivonkona.
Sakaizanao ny sigara.
Maka ny ôksizena amin'ny hoditrao ny sigara. Mandrisika ny fahanterana izany. Intelo avy heny kokoa no mampalaky antitra ny hoditry ny mpifoka mitaha amin'ny an'ny tsy mpifoka. Na izany aza tsy tokony hofaly avy hatrany ny tsy mpifoka. Fa raha tratran'ny setro-sigara ny hoditrao dia hiala ny hamandoany mason-koditra ka ho maina.
Mikoso-maso matetika ianao
Mampisy ketrona madinika sy manamatroka ny ambanin'ny maso io fahazarana tsy voatandrina io. Hampisy ketrona madinika kokoa ny fanosora-menaka matetika ny maso(n-koditra). Hanaratsy ny hoditra sy ny manodidina ny masonao izany. Mampalaky antitra ihany koa ny fametrahana hosotra anelanelan'ny manjamaso (volomaso lehibe) sy ny volomaso. […].
Mampiasa fandokoam-bolo manodidina ny maso.
Araka ny fanorotoroana, dia voarara ny fanoavana azy manodidina ny maso. Misy ihany na izany aza ny sasany aminareo no tsy mahatsiaro ho feno raha tsy mampiasa azy. Ny fampiasana fandokoam-bolo misy alikaola manodidina ny maso anefa dia manala ny hamandoana ka miteraka ketrona bebe kokoa.
Fampiasana fitaovana fanasan-koditra isan'andro
Noho ilay izy manalefaka hoditra avy hatrany, dia mampiasa fitaovana fanasan-koditra ianao. Manamaina ny sosonkoditra izay miaro ny hoditrao anefa ny fanaovana izany matetika. Hoditra ‘maty’ no esorinao. Raha maina hoditra ianao, dia ampiasao in-1 na in-2 isan-kerinandro izany. In-3 isan-kerinandro kosa raha menahana ny hoditrao.
Efa nampiasainao avokoa ny fomba fampihenan-danja rehetra.
Lasa mahia ianao noho izany fiezahana izany. Tsy ampy kaloria noho izay ilaina isan'andro ianao. Mitarika ho amin'ny fahabangan'ny vitamina, ny sira mineraly ary ny ‘tavy’ ilaina, ka hahatonga ny hoditrao hivalombalona.
Mizara hanana fahazarana hikosoka ny tavanao avy any ambany ho any ambony. Hampiroraka ny tavanao ny fikosohana ny tava hatrany ambony mankany ambany. Raha tsy tianao ny hanana endrika tahaka ny biledaogy (alika) dia ovay ny fahazaranao.
Tia mandeha amin'ny fitaovana mitovy amin'ny taramasoandro
Tsy vitan'ny hoe miteraka vongan-doko melanika ihany ny taratra Ultraviolet, fa mandrava singa ilain'olombelona ihany koa. Voka-pikarohana vao haingana iray no nahitana fa mitareka ketrona ity raha iray ity.
Mivoaka ivelan'ny trano amin'ny tava lena.
Mafana ny andro. Mivoaka mandeha ianao rehefa avy manasa ny tavanao. Mamono tena izany. Manintona taratra ultraviolet in-4 mihoatra noho ny an'ny manana hoditra maina ny an'ny manana hoditra lena. Fafao ny tavanao rehefa avy manasa tarehy ianao. Aza mivoaka ivelan'ny trano amin'ny volo mando ihany koa.
Tia mitanin'andro ianao (manao bronzage).
Raha tia mitanin'andro any ielany ianao dia idifio ny amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Jereo ny tenanao rehefa avy mitanin'andro mandritra ny andro ianao. Hitombo avo roa heny ny ketrona (sa mivonto) manakaiky ny maso ary hahita toy ny tandra mainty madinika izay tsy nanananao ianao.
Misotro rano fotsiny ianao mandritra ny fotoana hisakafoanana.
Arakaraka ny fatran'ny rano sotroinao ny taonan'ny hoditrao. Raha mbola manakaiky ny 20 taona ianao dia afaka mampivelatra tsara ny hoditrao amin'ny menaka fanosorana ary rano 1L. Raha mpifoka kosa ianao dia tokony hihoatra ny 1,5L ny rano sotroinao farafahakeliny.
Ambanin'ny 18˚C ny hafanana ataon'ny manatsara rivotra (climatiseur).
Raha amin'ny toerana misy fitaovana fanatsaran-drivotra mandeha ianao, mahatonga fahamainana amin'ny hoditrao io ka mitarika fahanteran'ny hoditra haingana. Amin'ny ririnina moa dia tahaka izany ihany ny asany rehefa manafana izy. Tazony tsy hifanalavitra loatra amin'ny hafanana any ivelany ny hafanana ao an-trano. Raha mahatsiaro ho maina ianao dia mampiasà rano atifitra (toy ny andro merika).
Mandro amin'ny ranomafana matetika.
Na vanimpotoana inona na vanim-potoana manao ahoana dia tokony handroamin'ny ranomafana aoanatin'ny 10 minitra ianao. Fa raha tsy izany dia ho very ny hamandoana sy ny menaka ilaina amin'ny hoditrao. Tsara ny manana hoditra toy ny misy zavozavona (?) rehefa avy mandro.
Sarobidy ny fotoana fatoriana.
Raha mbola mifoha ianao any amin'ny sasak'alina dia tsy manana fotoana hakana aina ny hoditra voantohintohina nandritra ny andro iny. Hampiroraka ny hoditrao izany ka hanary ny hoditra malandilandy. latsaka 15-18 isanjato ny hamandoan'ny hoditra ary hitombo 20 isanjato noho ny an'ny hoditra mahazatra ny menaka amin'ny hoditry ny olona miari-tory mandritra ny alina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/01/18/1509/